Akụkọ - BIB bụ ụdị nkwakọ ngwaahịa kachasị mma maka mmiri ọñụñụ
Nkwakọ ngwaahịa akpa-n'ime igbe, zoro aka dị ka Nkwakọ ngwaahịa BIB, bụ ụdị nkwakọ ngwaahịa kacha aga nke ọma n'afọ ndị na-adịbeghị anya na nkwakọ ngwaahịa ọhụrụ zuru ụwa ọnụ, n'ihi nchekwa ya, ịdị ọcha, ịdị mma, njirimara gburugburu ebe obibi, mmepe ngwa ngwa nke ahịa ndị Europe na America dị ka ndị kacha dị njikere ịhọrọ nkwakọ ngwaahịa ndị na-azụ ahịa.
Uru nke akpa-n'ime igbe:
1. Akpa n'ime igbe na-eji obere ihe nkwakọ ngwaahịa bụ naanị 1/5 nke akpa siri ike.
2. Nkwakọ ngwaahịa a na-eji akpa n'ime igbe dị mfe ikewapụ mgbake, a na-emegharị ya kpamkpam.
3. Enwere ike ịgbakọ ma chekwaa ya kpamkpam n'ihu na mgbe ejiri ya mee ihe, nke na-ebelata oke nchekwa nkwakọ ngwaahịa na ụgwọ njem na-ebelata ike oriri.
4. Ọtụtụ n'ime akpa-na-igbe bụ otu eji eme ihe, na-ezere mmetụta na mmebi nke gburugburu ebe obibi site na nsị kemịkal na nhicha.
5. Ruo 1400 lita nke nkwakọ ngwaahịa, nke pụtara obere nkwakọ ngwaahịa kwa otu olu nke ngwaahịa.
6. Ogologo ndụ nchekwa ngwaahịa na-ebelatakwa ihe mkpofu nke ngwaahịa na-emebi.
7. Mbelata ike oriri na akụrụngwa eji eme ihe.
8. Ịdị arọ dị arọ na ohere nchekwa akpa akpa-in-igbe, nke nwere ike imeziwanye arụmọrụ njem site na karịa 20% ma belata mmanụ ọkụ na ike oriri.
9. Ụgbọ njem n'otu n'otu (enweghị imegharị ihe ma e jiri ya tụnyere imegharị ụgbọ mmiri siri ike) na-echekwa ụgwọ njem.
10. Ịchekwa ihe ruru 80% nke oriri akụrụngwa tụnyere ụdị nkwakọ ngwaahịa ọdịnala.
11. Igwe ndochi na-agbanwe agbanwe ma na-arụ ọrụ nke ọma nwere ike ibelata ụgwọ ọrụ ume ma nwekwuo arụpụta ọrụ.
Akpa-n'ime igbe ngwaahịa na-adabara n'ụdị ọwa dị iche iche, nwere nnukwu ahịa ahịa. Na mgbakwunye na ụlọ, ụlọ ọrụ, mana ọ dabara nke ọma maka ụlọ oriri na ọṅụṅụ, ụlọ oriri na ọṅụṅụ, gyms, hotels, ọdụ ụgbọ elu na ọwa ndị ọzọ na-achọ ihe ọṅụṅụ dị elu.
Changzhou Kaiguan Packaging & Technology Co., Ltd. na-anabata teknụzụ dị elu nke ụwa, na-anakọta nkwakọ ngwaahịa nchekwa gburugburu ebe obibi, ma mepụta usoro mmepụta nke ngwaahịa ọhụrụ, ịhọrọ anyị bụ nhọrọ a pụrụ ịdabere na ya.
Oge nzipu: Sep-17-2021